सर्वश्रेष्ठ नहर अनि नदी नाउ बिदा युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > सर्वश्रेष्ठ नहर अनि नदी नाउ बिदा युरोप मा
सर्वश्रेष्ठ नहर अनि नदी नाउ बिदा युरोप मा
द्वारा liam Mallari
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 26/09/2020)
युरोप मा सर्वश्रेष्ठ नहर र नदी नाउ बिदा लागि देख यात्री सजिलो थाह युरोप छ आराम गर्न सक्छन् प्रचण्ड ठाँउहरु. तथापि, जहाँ सबै भन्दा राम्रो जलयात्रा लागि जाने थाहा छुट्टी कहिल्यै, तपाईंले केही अनुसन्धान गर्न छ. त्यहाँ शानदार नहर र riverboat छुट्टी विकल्प संग पाँच देशहरूमा छन्.
तपाईं सबै तिनीहरूलाई भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईंले सबैभन्दा गर्न अपील कि एक चयन. के केही तपाईँलाई यी बिदा केही प्रसिद्ध नहर र नदी सवारी छ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने छ. यहाँ हाम्रो शीर्ष पाँच सर्वश्रेष्ठ नहर र riverboat युरोप मा बिदा हो:
यस लेखमा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको थियो र सुरक्षित एक ट्रेन द्वारा गरिएको थियो सस्ता ट्रेन टिकट वेबसाइट विश्व मा.
1. नहर र नदी नाउ बिदा मा फ्रान्स
फ्रान्स च्यानल वा riverboat लागि धेरै सम्भव गन्तव्यका साथ एक सुन्दर देश हो छुट्टी. फ्रान्स गरेको क्षेत्रहरु को केही भन्ने सन्दर्भमा बाहिर खडा: को Midi, एक्विटेन को क्षेत्र, र क्यामरगुइ. तिनीहरूलाई प्रत्येक अद्वितीय गुणहरू छन्.
पहिलो छ नहर डु Midi, एक विश्व विरासत साइट र युरोप मा सबै भन्दा पुराना कृत्रिम waterway अझै पनि यसको मूल पाठ्यक्रम निम्नानुसार कि. पियरे पावलले Riquet को यो काम मा पूरा 1681. बाटो साथ, को Midi तल cruising, तपाईं Le Somail र Carcassonne देख्न सक्नुहुन्छ, दुई आकर्षक मध्ययुगीन बस्तियों. र यदि तपाईं प्रेम राम्रो खाना र ठूलो रक्सी, तपाईं Midi गरेको प्रसिद्ध MINERVOIS र Corbieres प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, र cassoulet, एक स्थानीय विनम्रता.
दक्षिणी फ्रान्स गरेको क्यामरगुइ अलिकति बढि छ आधुनिक, एउटा सुन्दर घमाइलो जलवायु र भू-मध्य सागर को निकटता संग. गर्दा क्यामरगुइ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं रसीला प्रकृति र birdlife अध्ययन गर्न सक्छौं. अरु के छ त, शहरी क्षेत्रमा पनि छन् आकर्षक सानो क्याफे हेर्न.
अन्तमा, तपाईं आफ्नो Luscious घाटिहरुमा मार्फत क्रूज रूपमा एक्विटेन आफ्नो हृदय कब्जा हुनेछ, यसको झरने र मनोरम भीर हेर्न. त्यहाँ मार्गहरू लिन एक भीड छ, नदी Charente तल जलयात्रा सहित. फ्रान्समा, तपाईंलाई हरेक बाटो enchanting छ, र पूर्णतया यो अनुभव एक अद्भुत भावना छ.
पेरिस गाडिहरु गर्न एम्स्टर्डम
लन्डन पेरिस गाडिहरु गर्न
पेरिस गाडिहरु गर्न रोट्टरड्याम
पेरिस गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
2. नहर र नदी नाउ बिदा मा इटाली
जब तपाईं च्यानल र इटाली विचार, मनमा आउने पहिलो कुरा हो भेनिस. को भेनिस दह विशाल छ, नहरहरुमा संग मार्फत कटौती, र यो प्रदान गर्दछ यात्री लागि अद्वितीय अनुभव जो नौका विहार प्रेम. तर पनि अधिक त भन्दा भेनिस नै को नहरहरुमा जलयात्रा, इटालियन तट एक नै जोड.
सुरु गर्ने हरु को लागि, तपाईं enchanting द्वीप Torcello भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, Burano, र प्रस्ताव धेरै छ कि मुरानो. यदि तपाईँ चाहानु हुन्छ भने, आफ्नो धेरै विशेषज्ञ पसलहरूमा एक समय खर्च. यदि छैन, तपाईं सधैं भेनिस नै शहर मा सेल गर्न सक्नुहुन्छ. हरेक waterway त्यहाँ एक सुन्दर छ, विशेष गरी जब मौसम राम्रो छ. इटालियन बढी सुंदर भ्रमणका लागि नदी Brenta वा Sile नदी मा सार्न देहात.
इटाली गरेको प्रस्ताव प्रशस्त पायो यसको सुन्दर नदी संग, र भेनिस को नहरहरुमा छन् एक-हेर्न पर्छ. तपाईं युरोपेली ठाँउहरु र उत्कृष्ट waterways को सबै भन्दा राम्रो हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं इटाली तिनीहरूलाई पाउनुहुनेछ.
रोम गाडिहरु गर्न फ्लोरेन्स
रोम गाडिहरु गर्न नेपल्स
फ्लोरेन्स ओस्लो गाडिहरु गर्न
3. नहर र नदी नाउ बिदा मा जर्मनी
जर्मनी तपाईं युरोप मा सबै भन्दा राम्रो नहर र riverboat बिदा उल्लेख गर्दा विचार पहिलो स्थान हुन सक्छ. तथापि, यो देश टाढा सुन्दर waterways घटी देखि अन्वेषण गर्न छ. दुई क्षेत्रहरु बाँकी देखि बाहिर खडा: मेक्लेनबर्ग र ब्रेन्डेनबर्ग, आफ्नो आकर्षक नहरहरुमा र पोखरी घेरिएको रसीला वन.
के विशेष गरी आकर्षक बाटो साथ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि छ आश्चर्यजनक महलों, मध्ययुगीन महल, र विचित्र पुरानो सहर. र पक्कै प्रकृति प्रेम गर्नेहरूले वन्यजन्तु को unspoiled उजाड र richness पाउनेछन्.
बर्लिन नै थप पुल पनि भेनिस गर्छ भन्दा छ, र लगभग 100 अन्वेषण गर्न नहरहरुमा. तथापि, आफ्नो जर्मन नहर र riverboat छुट्टी साहसिक पनि पोट्सडाम र ब्रेन्डेनबर्ग तिर तपाईं लिन सक्छ. यो अद्वितीय र आराम तरिकामा जर्मनी अन्वेषण गर्न मौका नगुमाउनुहोस्.
बर्लिन पोट्सडाम गाडिहरु गर्न
बर्लिन हैम्बर्ग गाडिहरु गर्न
फ्रैंकफर्ट बर्लिन गाडिहरु गर्न
म्यूनिख गाडिहरु गर्न बर्लिन
बेल्जियमसँग राम्रो बोनस छ यसको पक्षमा जब यो युरोपमा सबै भन्दा राम्रो नहर र नदी डु holidays्गाको छुट्टीहरूको कुरा आउँछ. यो बोनस को फ्लेमिश क्षेत्र र यसको waterways को सौन्दर्य छ. जबकि बेल्जियम waterways मनोरम ग्रामीण सेरोफेरो भेटी को अर्थमा परम्परागत छैनन्, तिनीहरूले पक्कै पनि केही रोमाञ्चक ठाउँमा तपाईं लाग्न सक्छ.
उदाहरणका लागि, ब्रुग्स पक्कै गएर लायक छ, र नहरहरुमा गरेर अन्वेषण को यात्रा बनाउँछ अझ रोमाञ्चक. ब्रुजको हावामा निश्चित रोमान्स छ, भेनिस जस्तै. र आकर्षक मध्ययुगीन संरचना र चकलेट पसलहरूमा केवल थप्न वातावरण.
त्यसपछि Ypres छ, एक आश्चर्यजनक ठाउँ ऐतिहासिक महत्त्व र अद्वितीय फ्लेमिश ठाँउहरु को पूर्ण, ध्वनि, र स्वाद. स्वादिष्ट बेल्जियम आफ्नो बाटो सेल हस्तनिर्मित चकलेट, जीवंत र मजबूत वा बेल्जियम बियर. देश सबै सचेत लागि शुद्ध आनन्द तपाईंलाई स्वागत हुनेछ.
आन्ट्वर्प गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
एम्स्टर्डम आन्ट्वर्प गाडिहरु गर्न
लिले आन्ट्वर्प गाडिहरु गर्न
पेरिस आन्ट्वर्प गाडिहरु गर्न
कुनै सूची सबै भन्दा राम्रो युरोपेली गन्तव्यहरू नेदरल्यान्ड बिना पूर्ण हुन सक्छ. त्यो युरोप मा सबै भन्दा राम्रो च्यानल र riverboat बिदा प्रस्ताव गन्तव्यहरू समावेश. waterways को देश सूची यसको स्थान फेला पार्न थियो, यसको आश्चर्यजनक दृश्य गर्न owing, सुंदर मार्गहरू यस सजिलो र जलयात्रा को सौहार्द र.
डच देहात र यसको waterways ठूलो अनुभव प्रदान. सायद अरू कुनै ठाउँले त्यस्तो सुलभ समुद्री यात्राको घमण्ड गर्न सक्दैन सानो गाउँ र यति धेरै राम्रा ठाउँहरू पछि. परम्परागत-देख द्वारा पारित कल्पना डच वायुघट्टहरू, आफ्नो चिन्न उपस्थिति र आकर्षण संग. कल्पना को तुलिप्स देख को समीर मा swaying को फ्रिसियाई क्षेत्र मार्फत पारित गर्दा.
एम्स्टर्डम गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
लन्डन एम्स्टर्डम गाडिहरु गर्न
एम्स्टर्डम गाडिहरु गर्न बर्लिन
पेरिस एम्स्टर्डम गाडिहरु गर्न
युरोप मा एक Riverboat छुट्टी योजना? पुस्तक आफ्नो रेल टिकट बचत एक ट्रेन र आनन्द संग!
हाम्रो मत लिन
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-canal-river-boat-holidays%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml र तपाईं / RU गर्न / ja वा / र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
#canal #riverboat #यात्रा europetrains eurotrip trainjourney
मेरो ब्लग लेखन अत्यधिक सान्दर्भिक प्राप्त गर्न सजिलो तरिका हो, अनुसन्धान, र पेशेवर सामग्री लिखित, म म संभवतः गर्न सक्छन् संलग्न रूपमा बनाउन प्रयास. - तपाईं यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सम्पर्क गर्नुस्
10 इटाली कहानी किला तपाईं भ्रमण पर्छ
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप
10 सर्वश्रेष्ठ बेकरी मा युरोप प्रयास गर्नुहोस् लागि
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा डेनमार्क, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
गाडिहरु मा यात्रा को लागि सुझाव ब्याकस्पेसिङ
10 सुझावहरू कसरी चीन द्वारा यात्रा गर्ने
10 यूरोपमा सबैभन्दा सुन्दर तटीय शहरहरू
10 महाकाव्य स्थानहरू चीन मा भ्रमण गर्न
10 यूरोपमा सर्वश्रेष्ठ थिम पार्क
7 यूरोपका सबै आश्चर्यजनक फुटबल स्टेडियमहरू